Riyad Mahrez oo waydiistay maamulka Leicester City in la fasaxo suuqa xaggaagan – Gool FM
Riyad Mahrez oo waydiistay maamulka Leicester City in la fasaxo suuqa xaggaagan
Liibaan Fantastic May 30, 2017
(Leicester) 30 Maajo 2017 Laacibka kooxda Leicester City ayaa dalab bixitaan ah u gudbiyay maamulka sare ee kooxdiisa sida ay baahisay Sky Sports.
Riyad Mahrez ayaa si cad u sheegay in madaxwaynaha kooxda uu kula heshiiyay xaggaagii hore inuu la sii joogo kooxda hal sano oo dheeri ah kadib markii kooxdu ay ku guulaysatay horyaalka ingiriiska.
Wuxuuna intaa ku daray in haatan la joogo waqtigii uu isaga dhaqaaqi lahaa garoonka King Power isla markaana uu u raadsan lahaa koox heer sare ah oo uu u ciyaaro.
“Marka laga soo tago jacaylka aan u qabo Leicester, waxaan jeclahay inaan runta ka hadlo, waxaan ku wargaliyay kooxda in la joogo waqtigii aan bixi lahaa” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Riyad Mahrez.
“Sifiican ayaan ula hadlay madaxwaynaha kooxda xaggaagii hore, waxaan isku afgaranay inaan xiliciyaareed kale la sii joogo si aan kooxda ugu caawiyo wax walba oo karaankeyga ah, kadib ku guulaysigii horyaalka iyo u soo bixidii Champions League”.
“Sidaas oo ay tahay waxaan ahay shaqsi hormarka jecel, waxaan rumaysanahay in la joogo waqtigii aan raadin lahaa loolan cusub”.
XOG: AC Milan oo Biglia la heshiisey & Ricardo Rodriguez oo maalmaha soo socda kusoo biiraya
Real Madrid oo soo cusboonaysiisay xiisaha ay u qabto saxiixa Moussa Sissoko